के छ खबर परदेशीको ? - HimalDarpan
विश्वका १८६ देश पुगिसकेको कोरोना भाइरसले विश्वलाई चिन्तित बनाएको छ । नेपालमा अहिलेसम्म यो रोगको संक्रमण देखिएको छैन । तर, विदेशमा संक्रमण फैलिँदा त्यहाँ रहेका नेपालीको स्वास्थ्यको विषयमा देशमा चिन्ता बढेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालय, श्रम मन्त्रालय र गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को तथ्यांकअनुसार भारतमा १५ लाख र तेस्रो मुलुकमा ३५ लाख नेपाली छन् । परदेसिएका नेपाली उच्च शिक्षा र रोजगारीमा सक्रिय मात्र छैनन्, वर्षमा नौ खर्ब रेमिट्यान्स पठाएर जन्मभूमिको अर्थतन्त्र धानेका छन् । गत आर्थिक वर्ष उनीहरूले आठ खर्ब ७९ अर्ब रेमिट्यान्स पठाएका थिए । यो अभूतपूर्व विपत्मा तिनको अवस्था के छ ? देशले सोध्ने वेला भएको छ ।
पछिल्ला दिन कोरोना संक्रमणले युरोपको इटाली सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको छ । इटालीमा करिब पाँच हजार नेपाली छन् । तर, त्यहाँ नेपाली सुरक्षित रहेको पौड्यालले बताए । एनआरएनएका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) हेमन्त दवाडीका अनुसार इटालीको उत्तरी भेगका मिलान र लम्बाडी सहरमा नेपालीको बसोवास छ । कोरोना भाइरसको संक्रमण पनि त्यही क्षेत्रमा बढी देखिएको छ । अधिकांश नेपाली होटेल, रेस्टुरेन्ट क्षेत्रमा कार्यरत छन् । तर, युरोपमा नेपालीको बसोवास निश्चित भेगमा मात्र सीमित नरहेको दवाडीले बताए । ‘एउटा ठाउँमा भनेर गएका नेपाली युरोपका अर्को ठाउँमा बसेर काम वा व्यापार व्यवसाय गरेका छन् । तर, जहाँ रहे पनि एनआरएनएको समन्वयमै छन्,’ उनले भने ।
दक्षिण कोरिया : ४२ हजार
हङकङ : १५ हजार
अस्ट्रेलिया : १ लाख
सिंगापुर : ५ हजार
मलेसिया : ७ लाख
थाइल्यान्ड : ५ हजार
माल्दिभ्स : ५ हजार
चीन : ८ हजार
भारत : १५ लाख
पाकिस्तान : २ सय
अफगानिस्तान : ३ हजार
इरान : २५ जना
साउदी अरेबिया : ३ लाख
इराक : १५ हजार
कतार : ३ लाख ५१ हजार
बहराइन : ३५ हजार
कुवेत : ७० हजार
युएई : ४ लाख
ओमान : १७ हजार
इजरायल : १२ हजार
इटाली : ५ हजार
पोर्चुगल : १० हजार
स्पेन : २० हजार
फ्रान्स : ५ हजार
बेल्जियम : १० हजार
जर्मनी : २० हजार
लक्जम्वर्ग : २२ सय
नेदरल्यान्ड : २ हजार
नर्वे : १ हजार
स्विडेन : १ हजार
डेनमार्क : २५ सय
अस्ट्रिया : १५ सय
बेलायत : १ लाख ५० हजार
अमेरिका : २ लाख
क्यानडा : १५ हजार
(परराष्ट्र मन्त्रालय, श्रम मन्त्रालय र एनआरएनएको सहयोगमा तयार तथ्यांक)
चीनको अलिबाबा कम्पनीका मालिक ज्याक माले नेपाल, अफगानिस्तान, बंगलादेश, कम्बोडिया, लाओस, मालदिभ्स, मंगोलिया, म्यानमार, पाकिस्तान र श्रीलंकाका लागि मास्क, टेस्ट किट्स र थर्मोमिटर दिने घोषणा गरेका छन् । यी देशका लागि १८ लाख थान मास्क, दुई लाख १० हजार किट्स र ३६ हजार प्रोटेक्टिभ स्विट्स दने घोषणा शनिबार ट्विटमार्फत गरेका हुन् । उनले ट्विटरमा लेखेका छन्, ‘चाँडै नै यो वितरण सजिलो छैन, तर हामी प्रतिबद्ध छौँ ।’ – पर्शुराम काफ्लेले नयाँ पत्रिका लागि तयार पारेको समाचार
इथियोपियाका प्रधानमन्त्री अहमदलाई नोबेल शान्ति पुरस्कार